Ny fomba fanasana hosoka amin'ny milina fanasan-damba sy amin'ny tanan-tsasatra, midika
Ahoana ny fomba fanasana hosodoko sy tsy hanimba ny bika aman'endriny - torohevitra sy fitsipika
Efa hatry ny ela ny lasa taloha, raha ampiasain'ny lamba firakotra fotsiny ny lamba firakotra. Ankehitriny, ny sokajin-taona rehetra sy ny vondrona sosialy dia manaiky ny denim-bika - ireo tovovavy tanora sy ireo mendri-piderana dia afaka mirehareha amin'ny fananana pairs maromaro ao am-bala. Saingy ny olon-drehetra dia tsy ny rehetra no mahafantatra ny fomba fanasan-damba mahitsy.
Mila manasa jeans vaovao aho aorian'ny fividianana?
Ny endrik'olon-kendreny maharitra sy azo itokisana dia manana ny endriny manokana. Ohatra, amin'ny endriny sasany, ny sasany dia afaka mamolavola ny faritra mifanaraka amin'ny vatana, ary mamela ny loko maranitra. Ity tranga ity dia tsy mahazatra ary tsy manondro ny kalitaon'ny vokatra novidina. Aza avela ny vokatry ny "tongotra manga" hanampy ny fanasan-damba voalohany, novokarina avy hatrany taorian'ny fividianana. Mba hanamafisana ny loko eo amin'ny lamba, dia asaina manampy kely (3-4 lany taolana) vita amin'ny vinaingitra vita amin'ny habokana amin'ny rano fantsona.
Fanasana fofona jeans
Ny akanjon-damba malaza dia malaza amin'ny faharetany sy ny fahafahany mahazo fahamendrehana manokana mandritra ny fotoana fohy - tsy mahatonga azy ireo hianjera kely amin'ny lamba sy ny tsy fisian'ny sary vongana. Amin'ity tranga ity, tsy sarotra ny manimba ny tovovavy: ny fialam-boly tsy voafaritra mazava na ny fanadiovana mahery vaika dia afaka mitodika amin'ny laoniny amin'ny lafiny rehetra amin'ny zavatra iray ao anaty laingony. Mba hisorohana izany dia zava-dehibe ny hahatakatra ny fomba fanasan-damba amin'ny tanana: tsy misy manga, amin'ny fomba marefo (manoro), manipika ny zipo rehetra ary mampivily azy ireo amin'ny tsy mety.
Amin'ny firy no tokony hanasako ny akanjoko?
Ny vatan'ny demokrasia dia vita amin'ny fasika vita amin'ny kodiarana, izay manana fahafahana mihazakazaka eo amin'ny dingan'ny fanaovan-jiro sy ny fanodinkodinana eo ambany fitarihan'ny rano mafana. Noho izany, na dia eo aza ny fanatrehana na ny tsy fisian'ny fahalotoana an-tsoratra ao amin'ny lamba, ny endriky ny jeans rehetra dia mamoy endrika amin'ny fotoana, ary avy eo mamerina izany rehefa avy misasa. Ny fiasan'ny jeans ho avy dia mivantana mivantana amin'ny firoboroboana - ny rano mafana kokoa, ny anton'ireo fibra dia mihena.
Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba fanasana hosodanana mba tsy hahatonga ny tompon-trosa ho iray kilao kely kokoa noho ny ilaina:
Mba hanasana ny vokatra jeans rehetra dia tokony ho eo amin'ny 30-40 ° C ny mari-panaovana rano. Amin'ny rano mangatsiaka dia hiharatsy ny fahalotoana, ary aorian'ny fampiasana rano amin'ny rano mangotraka, dia azo atao ny manakona mafy.
Mandritra ny dingana rehetra amin'ny fomba fitrandrahana rano (fanasana, fanasana, fanodinana), dia tokony ho mitovy ny isaky ny rano.
Inona no rano hosotroina?
Ho takatrao ny fomba hamafana ireo jeans vaovao dia hanampy ireo marika printy amin'ny marika anatiny. Ny famaritana azy ireo dia azonao atao ny mamantatra hoe inona avy ny mari-pamantarana tsara kokoa amin'ny fanasana zavatra vaovao (amin'ny ankamaroan'ny tranga 30-40 ° C), na azo atao ny manamboatra milina fanasana ho an'ity tanjona ity, na mendrika homena fomba fanao mahazatra. Ny fanadiovana maina amin'ny ankamaroan'ny jeans dia mifanohitra amin'izany satria izy io dia mety hitarika amin'ny fivalanana sy ny fisehon'ireo tendro. Ny manome zavatra iray amin'ny mpanadio maina dia tsy misy afa-tsy zavatra misy firavaka fotsifotsy (string, appliqués, slits).
Fomba ahoana no fomba fanasana hosoka mba tsy handosirany?
Isaky ny misasatra dia tapaka ny ampahan'ny loko avy amin'ny denim. Ity dia dingana tsy azo ihodivirana, izay vokarin'ny mpamokatra rehetra avy amin'ny sokajy vidiny rehetra. Hahafantatra bebe kokoa amin'ny antsipiriany izahay, toy ny hamafàna ireo jeans izay tsy nahavery loko:
Ny tsiranoka dia tsy tokony ahitana solifara sy solon-tsakafo hafa. Tsara ny mampiasa gilasy sy paoma manokana ho an'ny zavatra miloko (mainty). Ho an'ny fanasana tanana, ny fanosehana savony fanasan-damba tsotra dia mety.
Rehefa manangona sy manala vinaingitra kely dia mety misy vinaingitra kely ary / na sira ny taokarin'ny rano. Izany dia hanampy amin'ny fanamafisana ny loko ao anaty fasan'ny tavy ary hampihenana ny fanasana azy.
Tokony hovonoiko ve ny akanjoko rehefa manasa?
Andeha hodinihintsika amin'ny antsipiriany ny antony hanesorana ny tovovavy amin'ny fanasana. Ity toro-làlana ity dia vokatry ny endri-pihariana jeans: fomba roa amin'ny fanenon-koditra fibra, ny fisian'ny metaly paraky amam-borona (rivotra, zippers, sns.) Ary ny fahafahana mihena eo ambany fitarihan'ny rano. Ny fahandroana amin'ny alàlan'ny fanodinana anatiny sy ny bokotra dia manampy amin'ny fampihenana ny fanasana amin'ny loko, miaro amin'ny fanariam-pako tsy misy dikany amin'ny tapa-kazo ary mitazona ny haavon'ny hafanana.
Inona no azonao hanasana ny toeranao?
Hatramin'ny nisian'ny fanasàna jeans tao amin'ny milina fanasana dia mora kokoa sy haingana kokoa noho ny an'ny tanana, io fomba io no nahazatra indrindra. Na izany aza dia tsy mety foana ny mitaky fiara ho an'ny mpivady, na dia ny pataloha indrindra indrindra aza. Inona koa no azonao ampidirina amin'ilay orinasa? Ny namanao tsara indrindra ho azy ireo dia hitovitovy amin'ny endriky ny endrika mitovy loko. Noho izany, rehefa manasa lamba manga matevina amin'ny milina fanoratana ianao, dia afaka manipy tavy kotonga vitsivitsy. Ireo Jeans mainty afaka hosasana amin'ny kiraro na ny lobaka mainty. Ny tena manan-danja dia ny mifidy ny fomba tsara sy ny tsy hivezivezy ny milina fanaovana drôma.
Ahoana ny fomba fanasana lamba amin'ny milina fanasan-damba?
Ny fisasana jeans amin'ny milina fanasan-damba dia tsy vitan'ny hoe manimba azy ireo, fa manampy amin'ny famerenana fotoana ihany koa. Ireto manaraka ireto tokony hodinihina:
Jeans vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba, misy singa mamirapiratra sy loko tsy misy loko, afaka hosasana fotsiny amin'ny fomba fanasan-damba mahamay sy amin'ny kitapo fanasan-damba manokana.
Alohan'ny hisasana dia tsy maintsy mamantatra tsara ny poketra rehetra ianao, ary asio ilay zavatra eo amin'ny farafara ary alamino ny fifadian-kanina rehetra.
Ny isa betsaka indrindra ny revolisiona amin'ny jeans maingoka dia 800 rpm.
Ny fomba fanasana ny jeans amin'ny milina fanasana
Ho an'ireo mpankafy ny akanjo fitafy jeans rehefa misafidy milina fanasan-damba dia misy dikany ny hahazoana antoka fa manana programa manokana hanasana lamba izy. Fa raha tsy omena azy, tsy olana izany, satria afaka manasa jeans amin'ny milina fanasana:
Ao anatin'ny modely amin'ny fahafahana manitsy ny mari-pamantarana tsirairay dia ilaina ny fametrahana ny mari-panafana fanamorana ny rano 30-40 ° C, ny fotoana fanasana dia tsy mihoatra ny 40 minitra ary ny fihodinana amin'ny 400-600.
Ao amin'ny milina izay misy ireo mari-pamantarana fanasan-dàlana voatendry amin'ny fandaharan'asa manokana, ny hosotra dia mety hosasana amin'ny fomba fanasan-damba marevaka na amin'ny fomba fanasan-damba, ary amin'ny programa fanasana amin'ny volon'ondry.
Mipetraka ve ny Jeans rehefa manasa?
Ny fahaiza-manaon'ireo fibra ireo denimimina mihena eo ambany fitarihan'ny rano dia mametraka eo an-tanan'ireo izay nanao fahadisoana tamin'ny haben'ny lanjany na lanjany kely. Misy fomba maro hampihenana ny jeans rehefa manasa:
Misasà rano amin'ny hafanana (90 ° C). Ity fomba fitsaboana ity dia azo ampiasaina amin'ny fanasan-tanana sy ny masinina. Fa tokony ho raisina an-tsaina fa ny vovo-drano dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fibrain'ny tavy ary matetika izy ireo no iharan'ny "fandroana mafana" toy izany, vao haingana dia ho tsy azo ampiasaina izy ireo.
Imbetsaka dia manaroka azy ireo ho rano mafana sy mangatsiaka. Ity fomba ity dia ilaina amin'ny fampihenana ny modely, izay mifanohitra amin'ny fanasan-drivotra.
Vantany vao vita ny fanasana, manantona azy amin'ny lohan'ny rivotra mafana (ohatra, amin'ny batterie) na maina amin'ny vy.
Ahoana ny fomba fanasana tanana amin'ny tanana?
Ny pataloha dia nandao ny karazana fitafiana tsotra. Ny mpanamboatra dia manamboatra ny taranany amin'ny vato rongony, paingony, menaka na plastika. Ny mpanamboatra ny pataloha toy izany dia tsy inona fa ny fomba fanasana tanana amin'ny tanana:
Fiomanana. Alohan'ny handehanan'ny rano, dia tokony hosafosafoina kely ny poti-tsetroka, hipetrapetraka ary hiala eo an-damosiny. Manaova fanasan-damba sy manasa tsara tsara amin'ny endriny miorina tsara, noho izany dia tsara kokoa ny manondraka ny rano mivantana ao anaty lavadavaka, fa tsy ao anaty lakandrano. Ho an'ny fanosehana ny vovoka dia mila borosy matevina ambany
Hahavonto. Raha misy loto matevina alohan'ny fanasana jeans, dia azo atao anaty rano mafana izy ireo. Ny fotoana farafaharatsiny amin'ity dingana ity dia tsy mihoatra ny 30-40 minitra, raha tsy izany dia mety misy fisaraham-bazana amin'ny ampahany metaly. Ny rivotra sy ny tselatra dia tsy namoy ny fahazavany, mangalà azy tsara kokoa amin'ny famokarana savony fanasan-damba.
Wash. Rehefa avy nisakafo ny savony amin'ny savony fanasan-damba, dia ento amim-pitandremana azy amin'ny lafiny rehetra amin'ny pataloha, ary ampidino ny fandaminana ny fibre. Ny fomba fiasa toy izany amin'ny fomba fiasana amin'ny akoho dia hanampy amin'ny fanalana ny vovoka maloto, tsy manimba ny endrik'ilay lamba.
Hosasany. Ny fanosehana avy amin'ny ranon-tsakafo dia mamafa ny savony amin'ny tavy, mamerina imbetsaka ny fomba fitsaboana mandra-pialany tanteraka. Manangona rano kely ao anaty bandro izahay, ampio vilia vinaingitra vinaingitra ary miala 10-15 minitra. Avy eo dia aza esorina ny fanantonana ny efitra fandroana mba hanaovana ny rano glasa.
Midika hoe fanasana jeans
Ary ny kalitaon'ny fandroana, ary ny fiainan'ny pataloha tianao indrindra dia miankina amin'ny habetsaky ny vovo-dronona manasa lamba. Ny fisafidianana savony amin'ny fanasana amin'ny tanana na ny milina dia tsara kokoa ny manolotra safidy ho an'ny vokatra tsy misy manga sy maka remover zavatra. Idealy - jiro manokana ho an'ny fanasan-damba, saingy mazàna dia mitaky mihoatra noho ny vokatra hafa izy ireo. Raha tsy vita izany, dia azonao atao ny mampiasa jiro amin'ny fanasana lamba na savony tsotra.
Mialà ao amin'ny efitrano fandroana amin'ny kofehy amin'ny kilaoty
Ahoana ny fanesorana ny fanakanana ao amin'ny toeram-pivoahana?
Ahoana ny fanadiovana ny kitay miaraka amin'ny asidra citrique?
Noho ny fanesorana ny membrane?
Vetivety ny manadio ny efitrano?
Ahoana ny hanasana ny tananao amin'ny vozony?
Ahoana ny fanesorana ny tasy amin'ny vy?
Ny Brooke Shields taorian'ny 37 taona dia nijoro indray tamin'ny fampielezan-kevitra Calvin Klein
Marika famantarana ny schizophrenia amin'ny vehivavy - fihetsika
Seimaso voatabia ao an-trano
Famolavolana tranombarotra kely
Bra ho any aoriana
Mioron-kazo vita amin'ny hazo voajanahary
Ahoana no hanokafana ny mpanety azy amin'ny scratch?
Ahoana ny fisafidianana ny fantsom-panamboarana fiara mandeha amin'ny rindrina?
Tontolon'ny dachas avy amin'ny metaly sy hazo
Ahoana ny fomba hanamboarana atody amin'ny "kitapo"?
Paka - tantaram-piainana
Ambasady Peroa ao Kazakhstan